Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kirismaska ​​iyo fasaxyada sanadka cusub iibka huteelada
Waa waqtigii la ballansan lahaa joogitaanka Kirismaska ​​iyo ciidaha sannadka cusub! Waqtiga saxda ah ee aad ku kharash gareyn karto HK$5,000 ee soo hadhay ee foojarkaaga isticmaalka waxa uu dhacayaa dhamaadka sanadka.
Trip.com waxay bilaabaysaa iibka 11.11 Mega laba toddobaad laga bilaabo 1 ilaa 14ka Noofambar, iyada oo ugu yaraan laba hudheel oo caan ah u furan yihiin ballan-qaad ilaa 50% ah maalin kasta. Xitaa ka sii xiisaha badan waa Trip.com "Mudnaanta Kharashaadka Saddexda ah", kaas oo socon doona 1 iyo 11 Noofambar, kaas oo ay jiri doonaan 1) HK $ 111 rasiidh; 2) 11% laga dhimay kuubannada; iyo 3) Hudheelada lagu heshiiyo oo kaliya HK$11.
Marka lagu daro qiimo dhimis kala duwan oo ku saabsan jiidashada caanka ah iyo tigidhada dhacdooyinka sida Keigo Open House iyo Bandhiga "Jurassic X The Dinosaur Park", 10ka dalab ee ugu horeeya 11ka Nofeembar ee tigidhada Ocean Park iyo Ocean Park Water World waxay xaq u yeelan doonaan a tigidhka labaad ee HK$11.
Laga bilaabo 1 ilaa 10ka Noofambar laga bilaabo 11:11 subaxnimo maalin kasta, iyo laga bilaabo 00:00 (saqda dhexe) ee 11ka Noofambar, isticmaalayaasha Trip.com waxay ku raaxaysan karaan iibka tooska ah ee huteelada kala duwan ee HK$111 ama HK$1,111. Soojeedintu waxay ku salaysan tahay soo-horjeeda, oo marka hore loo adeego, oo leh wax aan ka yarayn 50 qol oo hudheel ah.